Mampiseho ny vanginy amin'izay ny Rio Tinto | Hevitra MPANOHARIANA
Mampiseho ny vanginy amin'izay ny Rio Tinto
2008-04-22 @ 11:57 in Toekarena
Mety ho tsy manaitra antsika loatra ny lohateny nefa ny zavatra nataon'izany orinasa goavana izany tany Amerika latina no nanaitra sy nampisy izany Ché Guevara nalaza tamin'ny fitolomana mitam-piadiana sy nantsoina hoe revolisionera. Nanaitra ny hambom-pon'io lehilahy io ny natao tamin'ireo mponina nanjakazakan'ny mpandraharaha sy nataony ho toy ny tsy manan-jo mihitsy.
Manana ny sampany eto Madagasikara ankehitriny io orita io dia ny Qit Minerals Madagascar izay miorina any Faradofay izany. Nampilendalendaina tamin'ny karama ambonimbony sy ny karazana tombotsoa samihafa aloha ny gasikely tamin'ny voalohany. Efa nisy ihany ny fotoana nanoratako teto fa tokony hanorina trano ho an'ny mpiasa izy ary notanterahiny moa izany.
Ankehitriny mivadika ny tantara, nitaraina tamin'ny haino aman-jery ny mpiasa ka nomarihiny fa nofoanan'ny orinasa ny tombotsoa azo rehetra teo aloha ary nisy aza no nampidinina ny kilasiny. Raha nomena trano ny mpiasa dia lasa nampanofaina avo dia avo indray izany trano izany, ary hita hoy ny mpiasa fa ny hamerenana ny vidin'ny fananganana ny trano mihitsy no atao ka ny mpiasa ihany no mandoa azy nefa tsy ho lasan'ny mpiasa akory ny trano avy eo.
Dia sanatria ve hiverina ny tantara ka ho tonga indray ny fanimbazimbana ny mahaolona ny mpiasa? Aza misy anie izany!